प्रविधिमा छलाङ मार्दै दक्षिण कोरिया,कोरियाले मानव निर्मित सुर्य बनाउँदै ! – Kantipur Press
दक्षिण कोरियाको सरकारले कृत्रिम सूर्य बनाउने योजना अघि सारेको छ। कोरियाले बनाउन लागेको कृत्रिम सूर्यको नाम ‘के स्टार’ दिइएको छ।
अब आउँदो परीक्षणहरुमा थप सुधारका कामहरु गर्दै सन २०२६ भित्रमा ३०० सेकेण्ड सम्म १ सय डिग्री उच्च तापक्रम कायम राख्ने लक्ष कोरियाले राखेको छ। कृत्रिम सूर्यले आवश्यक परेको बेलामा गर्मी बढाउनका लागि सहयोग गर्नेछ।
दक्षिण कोरियाली सरकारले ‘के स्टार’ को सहयोगमा पृथ्वीमै पहिलो पटक कृत्रिम रुपमा बिजुली उत्पादन गर्न खोजिरहेको छ। कोरियाली सरकारले सन २०१८ मा पहिलो पटक २० सेकेण्ड तथा यसै बर्ष ३० सेकेण्डका लागि १०० डिग्री उच्च तापक्रम कायम गर्न सफल भइसकेको छ।
कोरियाली सरकारले यसैबाट भविष्यमा बिजुली उत्पादका लागि आवश्यक तयारी र लक्ष राखेको छ। कोरिया जस्तै चीनले पनि कृत्रिम सूर्य बनाइरहेको छ। चीनले १ सय १ सेकेण्डसम्म २ सय १५ डिग्री फरेनहाइट तापक्रम कामय गर्न सफल भइसकेको छ।
चिन लगायतका विकसित देशहरुले न्युक्लियर फ्युजनका माध्यमबाट असिमित रुपमा स्वच्छ उर्जा प्राप्त गर्नका लागि यस किसिमको प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका छन। कोरियाले पनि यसै योजनाबाट भविष्यमा उर्जा प्राप्त गर्ने लक्षका साथ काम गरिरहेको छ।ईपिएस साथी
कोरिया बाट फर्केका यूवाले खोले व्यावसायिक म:म उधोग! मनग्गै आम्दानी !